Ingcali yemidiya yoluntu
NgoLwesibini, Julayi 14, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kodwa kwakhona namhlanje ndiye ndamenywa kwiziganeko ezimbalwa-ngokobuqu nange-webinar -ukufumana ukubonwa ingcali kwimidiya yoluntu kunye nokuthatha kwabo ukuthengisa kwimithombo yeendaba zentlalo. Njengoko ndijonga iiprofayili zabo, ulwazi lwabo lwe-LinkedIn, iisayithi zabo kunye neeblogi zabo, andifumani lwazi lubalulekileyo oluxhasa isiseko sokuba baziingcali kwimidiya yoluntu.
Imidiya yokuncokola ingcali? Ngokwenene? Mhlawumbi banamashumi amawaka abalandeli be-Twitter, amakhulu ezimvo kubo Facebook udonga, kunye nobulungu kwishumi elinambini okanye njalo kwinethiwekhi. Mhlawumbi kungenxa yokuba charlatan, ukrebe okanye igeek.
Yintoni endiya kuluhlula njengemidiya yoluntu ingcali? Ndiyaluthanda uluhlu lukaPeter Shankman iziqinisekiso kunye nokungafaneleki kweengcali zemidiya yoluntu. Ndingadibanisa- ukuba inxulumene neshishini- ndingathanda ukubona a uluhlu olude lokulinganisa iziphumo kunye nezalathiso kwiinkampani ezahlukeneyo kunye neendlela.
Ngaba ndiyazihlela njenge- ingcali? Ndiyayenza- kodwa hayi kuba ndibanga ukuba ndiyayiqonda yonke into. Esi sisixhobo esincinci kwaye siyatshintsha mihla le. Ukutshintsha isimilo seshishini. Ukutshintsha indlela yokuziphatha yabathengi. Ishumi leminyaka lamava aphuma kwintengiso ethe ngqo kunye nentengiso yedatha, ukuthengisa nge-imeyile, njl njl.
Andizibangi ndiyingcali ngenxa yolwazi lwam kwimidiya yoluntu… Ndizibanga ndiyingcali ngenxa yomsebenzi endiwenzileyo kwiinkampani ezinkulu nezincinci ukukhulisa ishishini labo, ukugcina kunye nokuthengisa abathengi, kunye nokunciphisa iifowuni zenkonzo yabathengi ngokuthi ukusebenzisa ngokufanelekileyo imidiya yoluntu.
Ngaba ndiyazibanga ndiyingcali ngenxa yomsebenzi endiwenzayo ngoku?
Nakuba VP yeqonga lokubloga, Sincede uninzi lwamashishini ukuba aphuhlise imithombo yeendaba zentlalo kunye neendlela zokukhangela ukuqhuba iinzame zokuthengisa ngaphakathi.
Ndinokuphumelela IArhente entsha yeendaba ngembali eqinileyo yokunceda iinkampani ukuba ziphuhlise kwaye zenze izicwangciso zazo zentlalo.
Ukudityaniswa kunye nezixhobo ezizisebenzelayo endizenzileyo kwifayile ye- kubloga, email, yokuzonwabisa kwaye indawo ehambayo ifikelele kumashumi amawaka eenkampani.
2 zentlalo Amanethiwekhi Ndincede ukuqala nokuqhubeka nokunceda ukubaleka.
Eyam ibhlog ehamba iminyaka eyi-5 + (kunye nesibini esingaphezulu kwamanye amaqonga) ethetha kwimidiya yoluntu kunye netekhnoloji yokuthengisa.
HAYI! Akukho nanye kwezi endifaneleka njenge ingcali.
Ndizibiza yingcali ngezizathu ezithathu:
Amashishini afuna Iingcali, hayi ii-gurus kunye neegeek.
Ukuzibiza ngokuba yingcali kundibambe kumgangatho ophezulu kunye nolindelo nenkampani ekufuneka ndiyizalisekisile.
Ingcali ngumntu owaziwa ngokubanzi njengomthombo othembekileyo wobuchule okanye ubuchule obunobuchule bokugweba okanye ukuthatha isigqibo ngokufanelekileyo, ngokufanelekileyo, okanye ngobulumko unikwe igunya kunye nenqanaba ngoontanga babo okanye kuluntu kwindawo ethile ebalaseleyo. Ingcali, ngokubanzi, ngumntu onolwazi olunzulu okanye ubuchule kwindawo ethile yokufunda.
Ngaba ndikrelekrele kunabanye abantu phaya? Nope.
Ngaba ndiyazi yonke into malunga nemidiya yoluntu? Akunjalongo noko.
Ngaba ezinye iingcali zihlala zivumelana nam? Ayilothuba!
Ngaba wonke umsebenzi wam uphumelele? Hayi-kodwa uninzi lwayo lukhona.
Ndiyakholelwa ukuba ndibenobuchule obukhethekileyo bokuhlalutya iinkqubo zeshishini, iindlela zokuthengisa, kunye nokumisela indlela itekhnoloji enokuwuvala ngayo umsantsa. Andiyi xoka kubaxhasi kwaye ubaxelele ukuba kufuneka babe yinxalenye yemidiya yoluntu ukuba banqwenela ukusinda. Ndabelana nabo uninzi lwempumelelo, nangona! Kukuphakathi endikholelwa kuko kwaye ndinethemba lokubona ukwamkelwa kobuninzi- hayi kuba kunokusetyenziswa ngamashishini amabi- kodwa ngenxa yokuba inokuxutyushwa ngamashishini amakhulu.
Ndiyakholelwa ukuba imidiya yoluntu idibanisa amashishini namathemba, yakha ubudlelwane obuphuculweyo phakathi kwabathengi kunye neenkampani, inyanzela iinkampani ukuba ziphucule iinkonzo zabathengi, zenze izinto elubala, kwaye zikhuthaze ubunkokheli bokucinga, italente yeshishini kunye nokudaleka… konke kulungile kushishino.
Kwaye, zihlobo zam, zezam ingcali uluvo.
PS: Ndiqinisekile ukuba ubuyela umva ngokwaneleyo kwibhlog yam okanye kumagqabantshintshi kwezinye iiblogi endikhe ndaziqhekeza kubantu abambalwa abazazisa ngobungcali babo. Ngoku lithuba lakho. 🙂
Jul 14, 2009 ngo-8: 48 AM
NgoJulayi 14, 2009 ngo-12:28 PM
Jul 14, 2009 ngo-6: 14 AM
NgoJulayi 14, 2009 ngo-12:51 PM
Jul 15, 2009 ngo-4: 13 AM
Jul 15, 2009 ngo-4: 17 AM
NgoJulayi 15, 2009 ngo-5:12 PM
Jul 17, 2009 ngo-2: 10 AM
Nov 4, 2011 ngo-12:52 PM
Nov 4, 2011 ngo-12:56 PM